SIDA LOO RAKIBO KULEYLIYAHA BIYAHA. XEERARKA LOOGU TALAGALAY RAKIBIDDA SOCODKA KORONTADA, KAYDINTA IYO QALABKA GAASKA EE KULEYLKA BIYAHA GURIGA - INFRASTRUCTURE
Ku rakibida habboon ee kuleyliyaha biyaha ayaa sameeya
Haddii aysan guriga ku jirin biyo kulul, ma sugi kartid inaad u muuqatid, laakiin si xeeldheer ayaad u qaadataa gacantaada. Warshaduhu waxay bixiyaan qalab badan oo kuleyl ah, oo loogu talagalay shuruudo kala duwan oo loogu talagalay, xaaladdooda hawlgalka iyo kartida maaliyadeed ee macaamiisha. Intaa waxaa dheer, farsamadani waa mid aad u shaqeynaya oo kaliya habka loo isticmaalo, laakiin sidoo kale inta lagu jiro rakibidda, in hawlgalkaani uu gebi ahaanba ku jiro awoodda mulkiilaha guriga.
Doorashada kuleyliyaha biyaha
Heerka laba nooc ayaa inta badan laga dalbaday maanta: socodka iyo isku uruurinta. Waxay ku xiran yihiin kuwa ugu yar ee loo isticmaalo: ee nooca isku dhiska, ee isku-dhafan iyo inta badan ee nooca dacha, ee badan.
Intaa waxaa dheer, noocyadan kuleyliyeyaasha waxaa sidoo kale loo qaybiyaa qaabka kuleylka. Qaar waxay u isticmaalaan koronto tan, halka kuwa kale ay isticmaalaan gaas.
Midkee oo ka wanaagsan oo ka sii xun ayaa macquul ah in la sheego isla markiiba, sababta oo ah waxay badanaa ku xiran tahay baahida qoysku u qabo biyo kulul (taas oo ah, mugga iyo inta jeer ee isticmaalka qalabka), qaababka kuleylka, ee ku saabsan xadhkaha korantada iyo isgaarsiinta gaaska, xataa laga bilaabo derbiyada qalafsan ee kululeeyaha biyaha lagu rakibay. Iyo, dabcan, laga bilaabo fursadaha maaliyadeed ee macaamilka.
Ma taqaanaa? Kuleyliyaha ugu horreeya ee biyaha kulul, oo leh muuqaal fog oo la mid ah kuwa hadda jira, waxa uu u muuqday qarnigii 13aad, kuleyliyahii korontada ee ugu horreeyey waxa lagu abuuray Jarmal 1885.
Koronto isku dhafan
Kuleyliyaha korontada ee korontada ku shaqeeya, ayaa sidoo kale loo yaqaanaa kuleyliyaha, sidoo kale wuxuu ka kooban yahay qiyaasta cufan oo leh miisaan 30 litir, iyo qiyaaso aad u qiyaasan oo ah 300 litir. Galka boorsada waxaa ku yaal kuleyliye korantada qaabka kuleyliyaha, taas oo ah, kuleyliyaha korantada ku shaqeeya, ama qaabka kuleyliyaha kululeeyaha.
Mabda'a hawlgalka ee kuleylaha waa mid sahlan. Waxaa ku jira qadar cayiman oo biyo ah, kaas oo, hoos ilaalinta heerkul-joogga, waxay si joogto ah ugu jirtaa xaalad ciriiri ah oo heerkuleed horay loo dhigay.
Duufaan kuleyl ah oo tayo sare leh oo ku wareegsan taangiyada kululeeyaha ayaa si taxadar leh u ilaalineysa kuleylka, taas oo u ogolaanaysa in lumo 0.5-1 ° C saacaddiiba. Waqti ka dib, ama marka la isticmaalayo biyaha kulul ee kuleyliyaha iyo u buuxinta biyo qabow oo ka yimaada biyo xiran, heerkulku wuxuu ku dhacayaa hal shahaadada, isla markiiba dushiisu waxay ku soo noqotaa kuleyliyaha, kaas oo kuleyliya maqaallada heerkulka ka sarreeya kan ka sarreeya.
Sidaas darteed, kuleyliyaha biyaha lagu keydiyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad had iyo jeer hayso biyo kulul oo ah heerkulka loo baahan yahay wakhti kasta oo maalinta ah. Faa'iidooyinka kululeeyayaasha waxaa ka mid ah awoodda ay ugu jiraan inay ku soo daraan qalabka korontada oo aan lahayn khariidad gaar ah.
Sidoo kale waa kululeeyaha istiraatiijiga ah ee istiraatiijiga ah, taas oo saacad kasta isticmaalkeeda korantada sida ay u isticmaalayso nadiifinta qashinka caadiga ah.
Suurtagalnimada in biyaha kulul ka soo daayo dabka lagu rakibay musqusha ee jikada ayaa iyana faa'iido u leh guriga.
Si aad u sameysid gurigaada, baro sida aad uga saari karto rinjiga hore ee derbiyada, qashinka noocyada kala duwan ee waraaqda ah, geli furka nalka iyo furaha.
Iyo la'aanta kuleylka waa mid kaliya, laakiin aad u muuqata. Qiyaasaha awooda badani mar walba ma aha mid ku haboon oo ku habboon dhererka musqusha. Isku dayidda xallinta dhibaatadan, naqshadeeyayaasha kululeeyayaasha biyaha kulaalaya ayaa xal u helaya xalal kala duwan, kuwa ugu caansan ee hadda waa dabayl dagan. Warcelin ka timid dadka isticmaala shabakada ku saabsan kuleyliyaha biyaha korontada
Dhamaanteen waan ognahay in dalkeena, bilawga bilaha kuleylka iyo illaa dayrta, waxay jecel yihiin in ay biyo kululaadaan laba toddobaad, 2-3 jeer sanadkii. Qarniga 21-aad iyo bulsho-dhaqameed, arrintaani ma aha midka ugu wanaagsan. Sidaa darteed, waxaa la go'aamiyey in lagu iibsado kululeeyaha biyaha. Sida ay u soo baxday, 50 litir oo biyo kulul, ma ahan wax dhab ah. Haddii qofku ku nool yahay guryo keli ah, kani waa ku filan. Haddii labo, ka dib marka mid ka mid ah kan kale ee horayba u qubaysnaa ma soo bixin. Waa maxay 50 litir? Maxay ku filanyihiin? Biyaha waxay si fudud ugu filnaan doonaan inay ku nadiifiyaan nadiifinta dhammaan saxuunada suxuunta. Kadibna waa inaad sugto waxoogaa biyo ah si aad u kululaato. Jooji qaadashada qubeyska. Dhab ahaantii, xaqiiqda ah in la qaato hadalka qubayska ma noqon karto. Biyaha waxay ku kulmaan saacad iyo badh, waxay ku xiran tahay goobaha, heerka ugu sareeya ee aad dhigto. Waxaa jira qaab istiraatiiji ah, si dhaqso ah ayuu u heegan yahay, laakiin sidoo kale wuxuu cunaa koronto badan. Wax dhibaato ah kuma jirin kululeeyaha biyaha. Waxaa si madaxbanaan loo rakibay. Waxay ku fiican tahay gudaha gudaha, waxay leedahay muuqaal wanaagsan oo casri ah. Waxaa jira guddi taabasho, taas oo muujinaysa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah: shahaadada, waqtiga, qaabka cayiman iyo wixii la mid ah. Guryaha magaalada oo ay jiraan biyo kulul iyo kuleyliye biyo ayaa loo baahan yahay oo kaliya si loo sugo xilliga xagaaga - doorasho weyn. Haddii aad qorsheyneyso inaad si joogto ah u isticmaasho biyaha kululeeyaha biyaha, waxaan si adag uugu talinaynaa in aad tixgeliso fursadaha leh mug weyn.
Si ka duwan sida caadiga ah, kuleyliyaha biyaha socda ee ma socdo biyo ma kaydiyo kuleylka, laakiin wuxuu u sheegayaa inuu si toos ah biyaha uga soo baxayo nidaamka biyaha. Sidaa darteed, size uu yar yahay.
Mabda'a hawlgalku waa marinka biyaha tuubada iyada oo loo marayo taan yar oo leh heeso kulul leh, kaas oo lagu kululeeyo heerkulka lagu dejiyo heerkulbeegga. Dhaqdhaqaaqa oo dhan waxaa lagu xakameynayaa dareeraha socodka, kaas oo, marka furitaanka qasabadda biyaha, diiwaangelinta bilawga dhaqdhaqaaqa dheecaanka isla markiiba ku soo noqo qaybta kuleylka. Marka qalabka la xiro, kuleylka si dabiici ah ayuu u baaba'aa.
Ka fiirso faahfaahin dheeraad ah sida loo xiro kululeeyaha biyaha kulul.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee kululeeyayaasha socodka badanaa waxaa ka mid ah cabbirkooda yar iyo kuleylka degdegga ah. Haddii, marka la isku xiro kuleyliyaha, mid waa inuu sugaa waqti dheer kahor intaanay biyuhu ku uruurin isla markaana kor u qaadin, biyaha kulul waxay bilaabayaan inay ka soo baxaan kululeeyaha socodka nus daqiiqo, ugu badnaan daqiiqad.
Xaaladaha qaarkood, faa'iido weyn oo ka mid ah nooca kululeeyaha ayaa laga yaabaa inay awood u leeyihiin in ay soo saaraan biyo kulul oo aan xadidnayn xaddidaad, halka karroolayaashu ay xadidan yihiin mugga taangiyada.
Qiimaha hooseeya ee kuleyliyaha biyaha degdega ah ayaa sidoo kale loola jeedaa faa'iidooyinkeeda, si kastaba ha noqotee, si deg deg ah ayaa loo qiyaasaa inta lagu jiro hawlgalka kororka isticmaalka korontada. Sidaa daraadeed, halkan bilawga ah waxaa si dhakhso ah loo naqshadeeyaa dib-u-celinta xiga.
Awoodda aadka u sarreeya ee kulayliyaha noocan oo kale ah wuxuu u baahan yahay qalab xarkood ah, taas oo adkaynaysa rakibidda.
Noociyeha nooca kuleylka ah waa mid aad u yaqaan dad badan waxaana loo yaqaan 'column gas'. Marka qalabka la furo, gaasta qalabka gawaarida si toos ah ayuu u iftiimaa, taas oo kululeeysa dareeraha maraya.
Galka gaaska wuxuu ku rakiban yahay heerkulbeeg, kaas oo suurtagal ah in la hagaajiyo heerkulka biyaha la rabo ee ka soo baxa qalabka. Isku toosinta toosinta ee xoogga dabka waxay ku xiran tahay cadaadiska biyaha ka dhex maraya qalabka mar kasta oo la bixiyo.
Geyserku ma qaato meelo fara badan oo si xajmiya loo dhejiyo meel walba oo uu leeyahay gaaska dabiiciga ah. Faa'idadeeda weyni waa wax soo saarka degdegga ah ee biyaha kulul isla markiiba ka dib markaad taabatid tuubada.
Si kastaba ha noqotee, khasaare khatar ah oo qalabkan ah ayaa ku tiirsan cadaadiska gaasta ugu yaraan 12 mbar.
Ma taqaanaa? Qalabkii ugu horreeyay, oo maanta loo yaqaano gaas gaas, ayaa lagu soo bandhigay Ingiliska horaantii 1868, iyo 1889-kii, markii ugu horreysay ee kuleyliyaha biyaha kulaalaya ee gaasku ku shaqeynayo gaaska ayaa lagu abuuray Maraykanka.
Kiimikada gaaska oo ku saleysan shaqadooda waxay la mid tahay mid koronto ah. In uu taangiga - sida caadiga ah, mugga weyn - biyo ayaa sidoo kale soo ururay, kaas oo u heelan ilaa heerkulka lagu dhigay hagaajiyaha awoodda. Waad ku mahadsan tahay rinjiga kuleylka leh ee kuleylka badan leh, kuleylku wuxuu awoodaa in uu hayo kuleylka kulaylka illaa wiig, oo aan ku jirin gaas gubaha.
Waxay faa'iido u yeelan doontaa mulkiilayaasha guryaha ee guryaha, ceymiska xagaaga, iyo sidoo kale deganayaasha waaxda gaarka loo leeyahay ee magaalooyinka sida loo sameeyo jidka ka jaridda qoryaha, jidadka la taaban karo, dhisida qaabka aasaasiga ah ee xayndaabka, ka samee xayndaab ka sameysan xayawaan, xayndaab ka sameysan silsilad isku xiran oo ay ku dhistaan ​​barkad gacmahooda.
Si ka duwan sida kuleyliyaha biyaha degdega ah, kuleyliyaha gaasku wuxuu awood u leeyahay inuu ka shaqeeyo cadaadiska gaasku hooseeyo.
Dhinaca kale, xaddiga biyo kulul ee uu soo saaro kuleylaha hal mar ayaa ku xaddidan mugga taangigiisi. Haddii, tusaale ahaan, qof ayaa ku bixiyay baahidooda oo dhan kuleylka ku dhexjiray taangiga, ka dibna sug ilaa inta soo-saarku soo socdo ilaa ugu yaraan saacad. Qaboojiyaha socodka wax dhibaato ah ma laha.
Dhibaatada kale ee weyn ee gaasta gaasku waa cabbirkeeda weyn, oo u baahan meel bannaan oo loogu talagalay rakibidda iyo awoodda ku filan ee derbiga oo lagu rakibo.
Noociyaha kululeeyaha waxaa loogu talagalay meelaha aan biyuhu jirin. Inta badan waxaa si guul leh loogu isticmaalaa guryaha guryaha. Mabda'a howlgalka waa mid fudud. Biyaha waxaa lagu shubaa tuumbada iyada oo loo marayo daloolka sare ee daboolka. Galka taangiga waxaa ku jira kuleyliye leh heerkulbeeg, iyo dibedda - rinjiga kuleylka.
Markuu biyaha ku dhex jiro taangiga ilaa heerkulkiisa la dhigo, qalabka kululaynta ayaa xirma. Waxay soo baxdaa xitaa haddii dareeraha mulkiiluhu hoos uga dhaco calaamadda ugu hooseysa.
Faa'iidooyinka noocan ah ee kululeeyayaasha biyaha waa in lagu daraa sida fudud, xajmiga, awoodda ay u leeyihiin inay ka shaqeeyaan maqnaanshaha tuubada.
Miisaan yar oo ka mid ah taangiga iyo baahida loo qabo in uu had iyo jeer ku daro biyo gacmeed, dabcan, waa in loo tiiriyaa cilladaha.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee hagaajinta guryaha gaarka loo leeyahay waa biyo. Akhri sida loo dhiso biyaha ceelka guryaha gaarka loo leeyahay.
Badanaa, tusaale ahaan, qaadashada qubeyska, kuleyliyuhu wuxuu ku yaalaa madaxa sare ee qofka, iyo biyaha ayaa qulqulaya tuubada lagu qubeysto by culeyska. Laakiin waxaa jira noocyo ay ku jiraan bamka gaar ah, kaas oo kordhiya cadaadiska. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay u baahan tahay taangiyo mug weyn oo weyn.
Doorashada goobta iyo goobta
Haddii gaadiidka socodka iyo kululeeyaha culus ma aha mid aad u adag sababtoo ah cabbirkoodu yar yahay, gaadiidka gawaarida waaweyn ayaa u baahan taxadar. Tilmaamaha soo saaraha waxay u baahan yihiin in lagu qaado gaadiidka tooska ah, sababtoo ah, iyada oo inkastoo bacda asalka ah ee tayo sare leh, ay ku xiran tahay, qaboojiyaha inta lagu jiro gaadiidka wuxuu waxyeeleyn karaa qashinka dibadda ama tilmaamaha heerkulka.
Doorashada goobta ku taal guriga meesha kululeeyaha la heli doono waxay ku xiran tahay nooca qalabka iyo goobta ilaha biyaha iyo gaaska. Si kastaba ha ahaatee, xaalad kasta, waxaa jira xeerar guud oo ku talinaya in la geliyo qalabka kuleylka sida ugu dhow ee suurtagalka ah meelaha ugu badan ee isticmaalka biyaha kulul. Intaa waxaa dheer, qalabyada waa in loo dhigaa si aan loogu fara galin dhaqdhaqaaqa dadka ee qolka dhexdiisa isla mar ahaantaana la heli karo dayactir.
Shuruudo gaar ah oo ku saabsan meesha ay rakibayaan waxay soo rogi karaan kululeeyaha culus iyo culus. Darbiyada ay ku xiran yihiin waa inay ahaadaan kuwo raasumaal ah oo u adkaysta miisaan siman laba jeer miisaanka qalabka biyaha ka buuxsamay.
Intaa waxaa dheer, kululeeyaha isbuunisku waa inuu lahaadaa labada dhinac rubuc mitir iyo ugu yaraan 10 cm meel bannaan oo bilaash ah oo wareega hawada. Sidoo kale, si looga fogaado in la ururiyo kondhiyeynta keenta dunta, waxaa lagu talinayaa in lagu diiriyo derbiga taageeraya.
Ku rakibidda filtarrada
Biyo kasta, ha ahaato tuubo ama si fiican, waxa laga yaabaa in ay ku jiraan waxyaabo aan nadiif ahayn kaas oo, wakhti ka dambeeya, ay awood u leeyihiin inay waxyeelo weyn u geystaan ​​walxaha gudaha ee qalabka kululaynta biyaha. Sidaa darteed, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in la geliyo nadiifinta nadiifinta qoto-dheer ee nidaamka biyaha. Ku rakibidu waxay ka jaban tahay dayactirka ama beddelidda nidaamka kuleylka oo dhan dhowr sano.
Iibsiga qalabka lagama maarmaanka ah
Si loo rakibo boorsada ama qalabka kale ee kululeeyayaasha biyaha ayaa loo baahan doonaa:
qalabka wax lagu dhejiyo oo aan ka yarayn 10 mm dhexroor;
qalab lagu hagaajin karo;
Waxaa intaa dheer, qalabka soo socda ayaa loo baahan doonaa:
Qalabka FUM, oo sida badan loo yaqaan silikoon;
laba duubis dabool ah oo loogu talagalay socodka ama saddex for kululeeyaha kaydinta;
laba ama saddex shandadood oo kala gooni ah.
Maqnaanshaha tubooyinka la daboolay, waxay sidoo kale u baahan yihiin in lagu iibsado xaddiga laba qaybood.
Ku rakibida nidaamyada dhejinta iyo hagaajinta kuleyliyaha biyaha
Iyadoo loo eegayo cabbirka adag iyo miisaanka culus ee gobolka oo ka buuxsamey biyo, taas oo labada derbi iyo habka dhidibku u adkeystaan, rakibidda kuleyliyaha ugu adag.
Qayb kastaa waxay ku qalabaysan tahay saxan taageero oo ku xiran xagga dambe ee kiiska iyada oo godadka fiilooyinka. Si ay godadahani u jaangooyaan sida saxda ah ee suunka gadaashooda ama balaastiga caagga ah ee lagu rakibo derbiga, waa lagama maarmaan inay labada ku dhejiyaan daarad adag oo qadhaadh ah oo qulqulaya derbiga kuna calaamadee meesha godadka la qodayo. Haddii rakibidda kaliya waa in la sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qiyaasta cajalad. Cabbiraadaha waa in si taxadar leh loo sameeyaa, iyadoo sax ah laba rodolitir. Ku rakibida nidaamyada xidhnaanta
Marka godadka mustaqbalka la calaamadeeyo, derbiga waa in lagu qodaa ilaa qiyaastii ugu yaraan 12 cm, waa in lagu dhajiyo dhererka 15 cm, ka dibna, qalabyada ama tuunbooyinka waxaa lagu geliyaa godadka, siday u kala horeeyaan, kuwaas oo xabadaha ama qabatooyinka la xakameynayo. Qalabka waxaa lagu dhejiyaa godadka saxda ah ee saxanka qalabka kuleyliyaha, iyo jiirarka ayaa si fudud loogu xiraa qabatooyinka.
Waa muhiim! Muhiim ma aha in la isticmaalo balaastiga caagga ah ee lagu rakibayo kuleyliyaha oo leh miisaan ka badan 50 litir, ujeedkani waa lagama maarmaan in la isticmaalo guntinta xirmooyinka oo keliya.
Waxaad ku xiri kartaa inta u dhaxeysa labada xarkood ee horeyba loo dhejiyay iyo hoos u dhigo kale oo dheeraad ah oo ku xiran qaybta hoose ee qorshaha. Tani waxay ka hortagi doontaa is-beddelkeeda. Xidib qaboojiyaha dheeraadka ah
Si loo xiro kuleyliyaha biyaha nidaamka biyaha, waxaa lagama maarmaan ah in lagu xiro qalabka ku yaala godka ugu hooseeya oo leh calaamad calaamadeysan oo buluug ah oo loo yaqaan 'adaptor', kaas oo loo yaqaan "American", kaas oo loo baahan yahay in la xiro. Waxaa lagama maarmaan ah in la xiro godka tuubada si ay dhinaceeda u ahaato, taas oo loo baahan yahay haddii ay tahay sabab qaar ka mid ah waa inaad faaruqisaa kuleyliyaha kululeeyaha.
Qeybta hoose ee foosha ayaa lagama maarmaan u ah in lagu soo xiro qalab nabadgelyo oo ka ilaaliya aalada cadaadis xad-dhaaf ah ama kuleyl ah. Kadibna tuubo ayaa ku xiran hoostaas tuubooyinka helitaanka biyaha tuubada ee cutubka. Xirmada Nabadgelyada
Meesha kale ee kululeeyaha, oo lagu calaamadiyay casaan, waxay isku xirtaa tuubo furan ama xidhaysa biyaha kulul ee qalabka.
Taas ka dib, qasabada biyaha qabow waxay ku xiran tahay nadaamka biyaha ee isticmaalaya tuubo jilicsan, waxaana qasabadda biyaha kulul ku xiran yahay xarkaha biyaha kulul ee dhammaan dhibcooyinka lagama maarmaanka ah ee guriga leh tuubo heerkulkiisu sarreeyo.
Maqnaanshaha qodobbada isku xirka dhirta iyo guryaha kuleylka guryaha, waa in la abuuraa. Haddii nidaamku ka kooban yahay tuubooyin dhoobo bir ah, ka dibna tuubada ayaa la gooyaa meesha loo baahan yahay waana in lagu rakibaa iyada oo la adeegsanayo qalab u dhigma, kaas oo biyaha kululeeyaha leh nidaamka badbaadada ee horey loogu rakibay isagoo ku xiran caawinta tuubada jilicsan. Tee
Maaddaama muuqaal aan muuqaal lahayn iyo nolol gaaban oo adeegga, dhuumo balaastig ah ayaa waayaya sumcadoodii hore ee maanta.
Marka nidaamka la qalabeeyo tuubooyinka polypropylene, xiriirka iyaga ayaa dhacaya iyada oo la jarayo qayb yar oo ka soo baxaysa tuubada iyo qulqulaya meeshii ay ku dhejin lahayd qalab bir ah oo birta leh oo leh ader. Nidaamkan habka loo xakameynayo nidaamka waxaa loo tixgeliyaa sida ugu kalsoon.
Way adag tahay in la galo nidaam ka kooban dhuumo bir ah. Meel yar oo waa in la gooyaa tuubada, ka dibna xadhig ayaa la jarayaa labada dhinacna waxaa la geliyaa xajin la xiriirta nadaafad nadaafadeed ama sgon. Waxaan dhejin karnaa
Isku xirka tuubada tuubada
Gaariga badbaadada, oo lagu rakibo boorsada, waxaa jira tuubo yaryar oo biyaha laga saaro xaalad degdeg ah. Inta lagu jiro hawlgalka caadiga ah ee qalabka ka soo baxa, suumada wax yar ka daa, taas oo muujinaysa xaalad wanaagsan oo ah valinka.
Si looga hortago in biyaha laga qulqulo dabaqa, tuubada biyaha tuubada waxaa la geliyaa tuubada laanta, taas oo inta badan isticmaasha tuubo ka timaadda daaweeye. Dhamaadka tuubada waxaa loo rogi karaa musqusha, saxanka u dhow ama ceelasha musqusha lagu qubaysto haddii qasabadda lagu rakibo musqusha. Tuubada ka daadi
Hubinta xidhiidhada nidaamka
Marka laga bilaabo bilawga cimilada qaboobaha, ilaalinta kulka qolka wuxuu bilaabmaa inuu ina dhibo. Baro sida loo xareeyo daaqadaha daaqadaha jiilaalka iyaga oo gacmahooda u leh.
Intee in le'eg ayey taasi ku soo noqotey ficil ahaan waxaa lagu arki karaa iyadoo la buuxinayo biyaha kuleyliyaha. Si arrintan loo sameeyo, mid ka mid ah iskujirayaasha ku xiran nidaamka biyaha guriga, u rog meesha "biyaha kulul". Kadibna waxaa lagama maarmaan ah in la furo tuubada biyaha qabow, taas oo ay sabab u tahay biyaha ay bilaabi doonaan in ay ku dhex socdaan taangiyada kululeeyaha, hawada waxaa lagu qasbi doonaa qasacadda furan ee qasacad furan. Ka dib marka hawada la beddelo biyo, miisaanka waa in la xiro.
Haddii aysan jirin dheecaan ka yimaada xubnaha, markaa qalabka rakibay wuxuu u diyaarsan yahay shaqo dhameystiran.
Marka hore u orod
Ku xiridda qalabka shabakada korontada oo aad u rogto, waxaad u baahan tahay inaad ku darto tilmaamayaasha qaabka kuleylka iyo hagaajinta tilmaamayaasha bilowga ee muujinta heerkulka. Kadib rubuc saacad ka dib waa inaad tirisaa tirooyinkaas. Haddii ay koraan, markaa kuleylka kuleylku si caadi ah ayuu u shaqaynayaa.
Ka hortagga nidaamka
Sida farsamadu muujinayso, kuleylinta ugu fiicani waxay u dhexeysaa 55-60 ° C. Heerkulkani, miisaanka ayaa si tartiib tartiib ah u dhistaa qaybta kuleyliyaha waxayna ka hortagtaa muuqaalka caaryada. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in kor loo qaado heerkulka kuleylka ilaa 90 ° C ilaa 1-2 saacadood todobaadkiiba si looga hortago muuqaalka bakteeriyada ee haanta kaydinta.
Waa muhiim! Laguma talineynin in heerkulka la dhigo kuleyliyaha 30-40 ° C, maaddaama ay gacan ka geysato horumarinta degdegga ah ee bakteeriyada gudaha qalabka..
Ka hor inta aan la bilaabin kuleyliyaha, waa lagama maarmaan in la hubiyo joogitaanka biyaha. Sannad kasta waa in laga saaraa qiyaasta tikidhada kulaylka. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad si joogto ah ula socoto hawlgalka caadiga ah ee anode, oo mararka qaarkood laga beddelo haddii loo baahdo.
Sidaa awgeed, xirfadaha qaarkood ee ka shaqeynaya qalabyada iyo helitaanka qalabyada naftooda, iyo sidoo kale daryeel iyo dulqaadka, ku rakibidda kuleyliyaha biyahaaga, oo ay ku jiraan kuleylaha culus, ma aha wax aan la xallin karin. In badan oo hanti badan oo guryo ah waxay caddeeyeen ficil ahaan.
Video: sida loo rakibo kululeeyaha biyaha sameeya
Qaboojiyaha biyaha korontada: dib u eegista internetka
Waxaan soo iibsaney kuleyliyaha biyaha kulul ee Thermex muddo dheer ka hor, illaa 5 sano ka hor, dukaanka Leroy Merlin. Miisaanka 30 litir oo jiilaalka ah ayaa ku filan annaga oo aan wax dhibaato ah lahayn, maadaama biyaha la isticmaalo kaliya jikada. Musqusha aan kululayn, jiilaalkana waxaa jira heerkul ah qiyaastii 0, marmarka qaarkoodna biyaha ayaa istaagaya dabaqa, sidaas awgeed ma nadiifin halkaa xilliga qaboobaha, laakiin kaliya qubayska. Laakiin xagaaga mugga taangani ma aha mid ku filan qoys weyn (xagaaga waxaan nahay 8 qof), ma jiraan biyo kulul oo ku filan hababka fiidkii, waana inaad sugto biyaha kuleylka. Aad ayay u adagtahay in la hagaajiyo heerkulka biyaha - nidaamiye aan kala-qaybin lahayn. Oo waxaannu kululeynaa si markaa suurtogal ah aan u furno kaliya tuubada kulul, iyada oo aan lagu barbaarin biyo qabow. Sanadihii la soo dhaafay isticmaalka, taangiga ayaa si muuqata wax yar uga soo baxa gudaha, biyaha ayaa ka jajabay, inkastoo mugdiga qabow nadiif yahay. Hantida inteeda kale way ku qanacsan tahay, waxay u adeegtaa waqti dheer. Waxay nagu xiran tahay 18 saacadood maalintii (habeenkii waan niri doonaa). Isticmaalka tamarta 2 kW / h. Marka ay ku guuldareystaan, waxaan u maleynayaa inaan iibsanayno shirkad isku mid ah, laakiin aad u sareeya.